Buugga Iibsadaha - Suuqa B2B - Macluumaadka Iibsadayaasha - Alietc.com
Halkan Alietc waxaa naga go'an abuurista suuq caalami ah oo suuq ah oo isu keena soo saarayaasha, iibiyeyaasha iyo iibsadayaasha, gacan ka geysashada abuurida wax wada qabsi iyo muddo-dheer, xiriir ganacsi oo waara.
Furaha guusha hadii iibsaduhu ku nasan karo dhowr arrimood oo shaqsiyadeed, si sare loogu qaado fursadahaaga guusha ee Alietc, waxaan soo uruurinay Buuggan tilmaamaha waxtarka leh ee kaa caawin doona inaad ka fogaato khaladaad badan oo caam ah oo la sameeyay markii la isku dayey in la iibsado alaabada.
Furaha abuuritaanka sumcad wanaagsan soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaashu waa in si dhakhso leh loo bixiyo
Inta badan ee aad isticmaasho Alietc, inta badan waxaad ogaan doontaa in sumcaddaada shaqsiyeed loo xisaabin doono heshiis weyn waxayna kaa caawin doontaa xiridda heshiisyada si fudud. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laxiriira sumcaddaada iibsade waa sida ugu dhaqsaha badan ee aad ugula xisaabtami koontadaada alaab-qeybiyaha ama soo saaraha. Waxay noqon kartaa inaad ogolaatay inaad 50% hore iyo 50% bixisid. Waxay noqon kartaa inaad ogolaatay alaab-qeybiye ama soo-saare in aad xisaabta ku darsatid muddo 30 maalmood gudahood ah ka dib marka alaabta la soo qaado.
Erey kasta oo aad ku raacsan tahay lacag bixinta, ku dheji isla markaana, haddii aad rabto inaad kobciso cilaaqaadyo muddada fog ah oo aad la leedahay iibiyeyaasha iyo soo saarayaasha, Bixiso si ka dhakhso badan sidii ay filayeen lacag bixinta.
Hal mawduuc oo caan ah oo aad ku ogaan doonto markaad isticmaaleyso nidaamka Calietc waa inaan meel dhigno waxyaabo badan oo xoogga la saarayo aaminaadda. Aaminaadda, ganacsiga, waxay u badan tahay badeecad ay iyadu leedahay, oo sumcad loo sameeyay sidii iibsade aamin ah, awoodda wax iibsashadaadu aad ayey u kordheysaa. Tusaale ahaan, soo-saaraha waxaa laga yaabaa inuu martiqaado dalabyada shey ay iibinayaan waxsoosaarkaasna adiga ayaa dan kuu ah. Bal ka fikir haddii soo-saaruhu leeyahay saddex dalab, laba laga soo iibiyo kuwa aan sumcad lahayn, iyo deeqdaada, oo waxyar ka yar, laakiin waxay ogyihiin haddii ay wax ka qabtaan, in lagu siin doono lacag la'aan wax dhibaato ah, fursadaha ayaa jira iyada oo laga yaabo inaad adigu lahaato deeqda ugu hooseysa, waa tan la aqbalo maxaa yeelay waxaa laguu arkaa inaad tahay iibsade aamin ah.
Wada xiriirka wanaagsan waa muhiim
Laga soo bilaabo bilowgii macaamil kasta, xiriir wanaagsan, cad oo isgaarsiin caadi ahna waa muhiim. Ha ka baqin inaad weydiiso alaab-qeybiyaha ama soo-saaraha wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabada ay iibinayaan, oo ay ku jiraan jadwalka keenista, iwm. Waa goor dambe inaad ka cawdo wax markii amarku yimid.
Dabcan, xiriirku ma aha inuu dhammaado marka amarkaaga la dhammeeyo oo ay badeecaduhu yimaadaan oo ay qanacsan yihiin. Ogeysii alaab-qeybiyeha ama soo saaraha inuu ogaado inaad gebi ahaanba ku qanacsan tahay wax walba oo aad rajeynaysid inaad mar labaad ganacsi sameyso mustaqbalka dhow. Qayb ka mid ah guusha Alietc waxay ku saleysan tahay tirada wanaagsan, xiriirka muddada dheer ka dhexeeyey iibsadaha, alaab-qeybiyeyaasha iyo soo-saareyaasha.
Halkan Alietc waxaan si buuxda ugu qanacsanahay inagoo ah caalami ahaan suuqa, dadka oo dhammi ma wada hadli doonaan isku luqad. Maaddaama xiriirka wanaagsan uu aad muhiim u yahay, waxaan soo uruurinay liis turjubaanno kaa caawin doona isgaarsiintaada.
La xiriiridda alaab-qeybiyeyaasha iyo soo-saareyaasha
Sababtoo ah iibsadayaashu maahan inay xubno ka noqdaan si ay wax ugu iibsadaan alaabada 'Alietc, waxaan go'aansanay in sida ugu aaminka badan ee lagu bilaabi karo wadaxaajoodku ay tahay in marka hore annaga nala soo maro. Haddii sheygu uu ku iibinayo qiimo go'an ama alaab-qeybiye / soo saare ayaa casuumaad u fidinaya, meesha ugu horeysa ee aad kala xiriireyso waa inay noqotaa Alietc.
Tani waa si aan uga fogaan karno '' spammers '' iyo in aan daboolno baaritaanno aan dhab ahayn. Mar alla markii aan ku qanacno su'aashaada inay tahay mid dhab ah, waxaan ku siin doonnaa faahfaahinta xirriirka iibiyaha ama soo saaraha kadibna waad la macaamili kartaa si toos ah, uma baahnid inaad ku darto Alietc wixii dheeraad ah.
Waad u adeegsan kartaa mashiinkeena raadinta awooda si aad uhesho soosaarayaasha ama alaab-qeybiyeyaasha badeecada aad raadineyso oo aad la xiriirto bixiyeyaasha bilaashka ah.
Waxaad ku bixin kartaa codsi alaab kasta oo ku liis-gareysan iibka dusheeda Alietc madal. Xalkan waxaad u baahan tahay inaad rukumasho u sameyso qorshe kasta.
Ugu dambeyntii, waad gudbin kartaa codsi badeecad, oo aad ku caddeyso waxa badeecooyinka (yaasha) aad raadineyso inaad iibsato iyo waxaad u diyaarsaneyso inaad ku bixiso (iyaga) - alaab-qeybiye kasta / soo saare oo soo saari kara badeecada (yaasha) aad raadineyso ayaa heli doonta ogeysiin deg deg ah oo ku saabsan dalabkaaga badeecada ka dibna waad la xiriiri doontaa haddii sicirka aad raadineyso inaad bixiso ay daneynayso iyaga.
Haddii aad raadineyso inaad iibsato alaabada, markaa xaqiiqdii waad timid meesha saxda ah. Alietc waa "Aladdin's Cave" oo laga dheehan karo shey kasta oo la malayn karo ama shey ceeriin ah oo aad qiyaasi karto, iyo qaar badan oo aadan xitaa ogeyn inay jireen.
Maaddaama ay tahay suuq dijital ah oo loo yaqaan 'B2B', Alietc waxaa loogu talagalay iyada oo ujeeddadeedu tahay in lagu soo bandhigo iibsadeyaasha alaab-qeybiyeyaasha iyo soosaarayaasha alaabada qiime qaali ah iyadoo la hubinayo heerar sare oo tayo sare leh. Waxa kale oo aad ogaan doontaa ayaa ah, iyada oo ku xidhan waxa aad raadineyso inaad iibsato, waxaad sifiican u heli kartaa dhowr iibiyeyaal, ha ahaato soo-saareyaal ama alaab-qeybiyeyaal, taas oo macnaheedu yahay inay aad u jeclaan doonaan inay kuu soo bandhigaan badeecad qiime kugu habboon si ay u bilaabaan waxa aan rajeynayaa inuu noqon doono xiriir wanaagsan oo waara.
Adeegsiga ballaaran ee habdhaqanka bartilmaameedka ah ee SEO, waxaan abuurnay suuq gaar ah oo dhijitaal ah oo loo yaqaan 'B2B suuq geyn' oo aan kaliya lahayn alaabooyin lagu iibiyo qiimo gaar ah maadaama laga yaabo inaad ka heli karto mashiinnada sida eBay ama AliBaba, laakiin waxay sidoo kale dhiirrigelineysaa wadahadalada tooska ah ee u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha, oo labadooduba ay xubno ka yihiin barnaamijka Calietc, taasoo micnaheedu yahay inay labaduba si dhab ah u doonayaan inay ganacsi yeeshaan.
Waxa muhiimka kuu ah inaad fahanto waa inaad leedahay awood guud oo aad ku maamusho sida iyo cidda aad ka iibsaneyso badeecada, sida hoos lagu shaacin doono.
Markaad isqorto Alietc, markaa waxaad awood u yeelan doontaa inaad abuurto astaantaada.
Fadlan waqti yar qaado si aad u abuurto muuqaal indhaha soo jiidan kara oo rafcaan ka qaadan kara macaamiisha iman kara - waxaan abuurnay hage waxtar u leh Abuuritaanka Profile-kaaga Alietc kaasoo si buuxda ay xubnuhu heli karaan. Iyada oo ay la socdaan tilmaamayaasha kale ee muhiimka ah ee adeegsada, tusahaaga abuurista tusmada ayaa kaa caawin doona inaad ku garaacdo dhulka orodka oo waxay kaa badbaadineysaa inaad lumiso waqti aan loo baahnayn.
Ugu dambeyn, waxaad u baahan kartaa inaad iska qorto mid ka mid ah kuwayada qorshayaasha xubinnimada, haddii aad rabto inaad dhigto dalab ama aad ku darto dalabka iibka sheyga.
Mar alla markii aad isqorto Alietc, waxaad xor u tahay inaad bilowdo raadintaada iyo meesha aad ka soo iibsanayso alaabada aad iibsanayso.
Tan waxaa lagu samayn karaa saddex siyaabood midkood:
Raadi oo la xiriir bixiyeyaasha. Waad u adeegsan kartaa mashiinkeena raadinta awooda si aad uhesho soosaarayaasha ama alaab-qeybiyeyaasha badeecada aad raadineyso oo aad la xiriirto bixiyeyaasha bilaashka ah.
Dhig baloogyada Waxaad ku dalban kartaa dalab alaab kasta oo ku liis-garaysan iibka aaladda Calietc. Xalkan waxaad u baahan tahay inaad rukumasho u sameyso qorshe kasta.
Codsi Iibsasho Alaab. Waad gudbin kartaa codsi badeecad, oo aad ku caddeyso waxa badeecooyinka (yaasha) aad raadineyso inaad iibsato iyo waxaad u diyaarsaneyso inaad ku bixiso (iyaga) - alaab-qeybiye kasta / soo saare oo bixin kara badeecada (yaasha) aad tahay raadinta ayaa heli doonta ogeysiin deg deg ah oo ku saabsan dalabkaaga badeecada ka dibna xiriir ayey la sameyn doontaa haddii sicirka aad raadineyso inaad bixiso ay daneynayso iyaga. Xalkan waxaad u baahan tahay inaad rukumasho u sameyso qorshe kasta.
Haddii aad wali su'aal qabtid
Maadaama aadan hore u isticmaalin Alietc, waxaa suuragal ah inaad su'aalo dheeri ah ka qabtid jawaabta aad rabto. Wax kasta oo su'aasha aad rabto ka jawaabto, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino, sidaas uun la xiriir oo si dhakhso leh ayaan uga jawaabi doonnaa.
Alietc - Aad Uga Badan Suuq B2B
Alaabada Beeraha - Midho, Miraha iwm
Dhirtu - Ubaxyo, Dhir & alaabooyin la xiriira
Xoolaha, Digaagga, Hilibka & Wax soo saarka xoolaha
Qalabka Bar-baarista iyo Alaabooyinka laxiriira